Mahad Salaad;”Xasuuqii Ceel Saliini Ma Xalbaa ” - Awdinle Online
Mahad Salaad;”Xasuuqii Ceel Saliini Ma Xalbaa ”
February 24, 2020 (Awdinle Online) –Xildhibaan Mahad Salad ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ugaga hadlay weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidamada ay ku lahaayeen Ceel Saliini halkaas oo ciidamo badan ay ku dhinteen.
Dowlada Federaalka ilaa hada sooma hadal qaadin qasaaraha naf iyo maalba leh ee ciidamadeena soo gaaray. Umana tacsiyeen eheladii askartii meeshaas lagu laayay.
Shan bilood kahor ayay ahayd markii sidaan oo kale Alshabaab ciidamada dowlada ku xasuuqeen Ceel Saliini, gadiid iyo hub farabadana ku qaateen. Intii yareed ee ka badbaaday xasuuqana xabsiyada ayay dowladu u taxaabtay!
Previous articleDhageyso :-Dignin loo diray siyaasiyiinta mucaaradsan dowlada soomaaliya
Next articleAl-Shabaab oo afduub u geystey wiil la dhashay mas’uul ka tirsan dowladda Kenya